प्रदेश प्रमुख र राजधानीमा सरकार उदासीन , प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताप्रति मन्त्री असन्तुष्ट – Rajdhani Daily
प्रदेश प्रमुख र राजधानीमा सरकार उदासीन , प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताप्रति मन्त्री असन्तुष्ट
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश अस्थायी राजधानी (मुकाम) नतोक्दा चौतर्फी आलोचना बढेको छ । सरकारकै कतिपय मन्त्रीसमेत प्रमुख र मुकाम नतोकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्न सरकारसँग शुक्रबार ताकेता गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलगायत दलले समेत विरोध जनाएका छन् ।
सरकारका एक मन्त्रीले प्रमुख र मुकाम तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अघि बढिरहे पनि ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘यो विषय प्रधानमन्त्रीको तहबाट भइरहेको छ, तपाईंलाई भन्नैपर्दा यो विषयमा उहाँले हामीसँग नै छलफल गर्नुहुन्न, कसरी गर्ने ? कसलाई गर्ने ? उहाँलाई मात्र थाहा होला,’ ती मन्त्रीले राजधानीसँग भने ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले पनि सबैको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरी र मुकाम तोक्दा यसको प्रतिक्रिया कम आउला कि भनेर सहमतिमै गर्ने प्रयास भइरहेको तर तोक्न ढिलाइ भने भएको स्वीकार गर्छन् । ‘प्रदेश प्रमुख र प्रदेश बैठकस्थल तोक्न ढिला भएकै हो, समय धेरै बितिसक्यो, अब पनि ढिला चाहिँ गर्न हुन्न,’ मन्त्री थापाले राजधानीसँग भने, ‘तर यो विषयको संवेदनशीलता हेर्दा विभिन्न ठाउँमा रियाक्सन आएका छन्, सबैको सहमतिमा तोकिएको भन्ने सन्देश दिँदा त्यो कम हुन्थ्यो कि भनेर पनि केही ढिलाइ हुन गयो ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरूले सर्वदलीय बैठकमा नै प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको भन्दै ढिलाइप्रति आश्चर्य प्रकट गरे ।सरकारले प्रदेश प्रमुख र मुकाम नतोक्दा प्रदेशसभाको अन्तिम नतिजा रोकिएर बसेको छ । आयोगले निर्वाचन आयोगलाई नतिजा बुझाउनुपर्ने तर प्रमुख नहुँदा आयोगसमेत अलमलमा छ । प्रदेश प्रमुखले नतिजा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा त्यसपछि सरकार गठनको काम सुरु हुने भए पनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ ।
सरकारले प्रदेश मुकाम नतोक्दा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योलतासमेत उति नै छ । सरकारले २४ माघका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । मिति घोषणा गर्ने तर अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सरकारले राष्ट्रिय सभाको मिति सार्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ । नेकपा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो सरकारले सत्ता हन्तान्तरण नगर्ने, मिति सार्ने र वाम गठबन्धन टुटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख र स्थान तोक्न सर्वदलीय बैठक राखेर तयारी गरे पनि प्रमुख र प्रदेश मुकाम तोक्न ढिलासुस्ती गरिरहेका हुन् ।
सरकारले सहमतिमा नै प्रमुख र मुकाम तोक्न प्रतिपक्षी तथा अन्य दलसँग छलफलसमेत अघि बढाएको छैन भने सरकार आफैंले तोक्न आवश्यक तत्परतासमेत देखाएको छैन ।
सरकारले गत सोमबार तथा शुक्रबारको नियमित मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै प्रमुख र मुकाम तोक्ने तयारी गरेको थियो । तर, सरकार अन्तिम समयमा पछि हटेको थियो । सरकारले सहमतिमै प्रमुख र मुकाम तोक्ने भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै आएको छ ।
गत शुक्रबार र सोमबारअघि बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सरकारले प्रमुख र मुकाम तोक्ने तयारी गरेर मुकाम र प्रमुखको नामावलीसमेत सार्वजनिक भएको थियो । तर, प्रदेश मुकाम तोक्ने सरकारको तयारीसँगै विभिन्न ठाउँमा विरोध हुन थालेपछि सरकारले मुकाम नतोकी प्रमुख मात्र तोक्ने गृहकार्यसमेत अघि बढाएको थियो ।